I-FAQs -Timpson Welding Equipment Co., Ltd.
Faka isicelo sentloko?
Beka umatshini we-welding kwi-stander, ukhethe intloko yokufa ngokobubanzi bombhobho, kwaye uyilungise kumatshini. Rhoqo, isiphelo esincinci sisekuqaleni, isiphelo esikhulu ngasemva.
Amandla (qiniseka ukuba amandla kufuneka abe nokuvuza komkhuseli okhoyo ngoku), ukukhanya okuluhlaza kunye nokukhanya okubomvu kuvuliwe, linda kude kube lula ukukhanya okubomvu kwaye ugcine ukukhanya okuluhlaza, okubonisa ukuba umatshini ungena kwimowudi yolawulo lobushushu oluzenzekelayo kwaye umatshini unokuba isetyenzisiwe.
Qaphela: ngexesha lolawulo lobushushu oluzenzekelayo, umbala obomvu kunye nokukhanya okuluhlaza kuya kuba nokucima kungenjalo, oku kubonisa ukuba umatshini uphantsi kolawulo kwaye awuyi kuchaphazela ukusebenza.
Sebenzisa umsiki ukusika umbhobho ngokuthe nkqo, tyhala umbhobho kwaye ungene kwintloko yokufa ngaphandle kokujikeleza. Zisuse kwangoko xa ixesha lokufudumeza lifikile (jonga kwitheyibhile engezantsi) kwaye ufake.
Ububanzi bangaphandle Ubushushu bokufudumeza Ixesha lobushushu Inkqubo yexesha Ixesha elipholileyo